Ukukhulelwa, isimo ngezinye izikhathi ezingalindelekile, kodwa emnandi kakhulu, futhi kusho ukuthi Ezinyangeni eziyisishiyagalolunye ezalandela, udinga ukushintsha okuningi ekuphileni kwabo evamile kuyo yonke imikhakha, yayo. Ikakhulu lokhu ngokuvamile kubonakala emsebenzini, futhi ukushintsha isimo sengqondo abasebenzi kanye neziphathimandla ukuze candidacy yakhe, ukudlulisela umsebenzi kulula noma uthole endaweni wangaphambili ngemva kokuba wadubula, ukuthola ikhefu unscheduled noma hooky abaseduze, udinga ukuqinisekisa isikhundla sakho - isitifiketi yokukhulelwa.
Ngokuvamile, leli phepha ukuze bangabhekani iyadingeka ukuze ukuphathwa kwenkampani, ngoba isitifiketi yokukhulelwa ekhishwe umsebenzi okwakuhlalwa kuzo lapho kusaqalwa, phambi ultrasound kuqala bese unikeza omningi izinzuzo omama esizayo. umthetho WezabaSebenzi, uma kwakukhona izingxabano, futhi lokhu, owesifazane othile isimo ithole ndawana lokho ongaxoshwa ngemva kokunikeza ireferensi, kuzonyamalala abaphathi sonke isifiso ukufeza uhlelo. Catching emsebenzini emisebenzini yezandla kungakwenza esindayo, owesifazane okhulelwe uzokwazi, sibonga lolu sizo, kufanele idluliselwe okuthunyelwe, ezokwenza lula umsebenzi futhi kuqedwe bokwenza eziningi ezihlobene ukuthuthukiswa kanye ukukhula kwengane yakho kwesisu. Uma umama okhulelwe okhathele, nayo emzimbeni azodinga ukuphumula, kalula kungenziwa esikhishwe isitifiketi yokukhulelwa iholide engahlelelwe okwesikhathi kwamasonto ambalwa noma esibhedlela.
Libuye ayisekho ngazo zombili ithuba lokuya ngenxa yebhizinisi, kanye unscheduled isikhathi esengeziwe abakhulelwe ngeke athinteke, ngakho ngokushesha owesifazane bazithobe umqashi isitifiketi zokukhulelwa, kangcono. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi le dokhumenti akusho ukususa hhayi ngomthwalo wemfanelo wezinsizwa ukusebenza okugcwele, kanye owesifazane okhulelweyo akanalo ilungelo ukuba sekwephuzile umsebenzi, akafikanga emsebenzini, aphange noma ukubhubhisa impahla umqashi kanye ukuziphatha ngendlela engafanelekile maqondana emphakathini futhi abaphathi.
Nokho, lesi sitifiketi kuyadingeka hhayi kuphela izinsuku ukusebenza, kungaba ukuxazulula ezinye izinkinga ezenza ukuphila kube lula futhi ukuyiguqula indlela okuyiyona yona. Uma kukhona umbuzo mayelana lomshado, kanye nesikhathi nosuku esikhethwe ngoba ambalwa abasebenzi wombuso isevisi yokubhalisa ukude kakhulu, isitifiketi bekhulelwe ukuze umbhalisi ukusiza ukuxazulula inkinga ukubhalisa eside futhi imisiwe. Kufanele ukudweba wezifo zabesifazane yakho, ukusayina udokotela abakhulu yokubonisana zesifazane, futhi yayeka zonke blue ukuphrinta. Ngokuvamile kukhona nobunzima nalokhu, futhi uma imizwa ezibizayo, isitifiketi esinjalo umane ukuthenga esikhungweni sokuqondisa eyenza le mibhalo bonke izikhathi, emini, ngaphandle emigqeni, futhi okubaluleke kakhulu, akekho kule isitifiketi yokukhulelwa prideretsya.
Amandla ukuklama iholide unscheduled umyeni wami zingenza uma kumelwe alethe isitifiketi bekhulelwe ukuze umqondisi wabo futhi abashadayo ithuba ndawonye ukuya eholidini kwesinye isifunda noma izwe. Futhi, uma umngane womshado noma isoka isencane kakhulu, ubufakazi sokukhulelwa sizonikeza phefu evela ebuthweni, nabafundi intombazane esikoleni - yokukhululeka imfundo ngokomzimba. Ukuze ugweme emigqeni yokubhaliswa mortgage futhi uthole izinzuzo extra, ukusiza ngokuyinhloko ukushintsha isimo sibe ngcono. Ukuze ezikudidayo phezu isipho othandekayo yokuqala, ungakwazi amnike isitifiketi yokukhulelwa ngaphambi kokuba athole ngalokhu ngokusemthethweni. Ngakho amantombazane ngokuvamile hlola Basabela kanjani guys - ukuthandwa, ukungathandwa.
Into ebaluleke kakhulu owesifazane okhulelwe - ukuphumula, ukudla okunempilo, futhi akukho imvelo elimazayo. Yonke enye into imbuda nje. Ukukhathazeka main umama okhulelwe lonke ukukhulelwa kumele kube umntwana ongakazalwa futhi impilo yakhe. Omama, khumbula ukuthi kwasekuqaleni.
Izimoto Kuhle ukuhamba nokungcebeleka
Ingabe ngidinga i-visa eDominican Republic? It kuncike izwe ohlala kulo